ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Friday, February 08, 2013 |0 ခုလောက် ဝေဖန်ကြည့်ရအောင်
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Saturday, October 06, 2012 |0 ခုလောက် ဝေဖန်ကြည့်ရအောင်
ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း ဟောပြောပွဲ တိုက်ရိုက်လွှင့်မည်
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Saturday, August 18, 2012 |0 ခုလောက် ဝေဖန်ကြည့်ရအောင်
ဒေါ်ခင်ကြည်ဖေါင်ဒေးရှင်းနှစ်တစ်ရာပြည့် အတွက် ၁၉-၈-၂၀၁၂ တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူ စံတော်ချိန် နေ့လည် ၂ နာရီမှ ညနေ ၇နာရီအထိ စင်ကာပူ ပိုလီ ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၊ဒိုဗာ MRT အနီး၊ ၅၀၀ ဒိုဗာလမ်း တွင် ဟောပြောမည့် အစီအစဉ်များကို လက်မှတ်ဝယ်ယူ၍ မရလိုက်သောသူများအတွက် Live တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမည်ဟု သိရပါသည်။ မြန်မာ့အနာဂတ် ၊မြန်မာ့ အိပ်မက်၊မြန်မာ့စိန်ခေါ်ချက်များကို မြန်မာ တို့ ဟောပြောမည့် ထိုရံပုံငွေမြှင့်တင်ရေးပွဲကြီးတွင် ဆရာအော်ပီကျယ်က(ဤခရီး မနီးသေးပါ) ခေါင်းစဉ် ဖြင့် လည်းကောင်း၊ဆရာ ကျော်ဝင်း မှ (အကောင်းဆုံးအနာဂတ်ကို ဦးတည်ခြင်း)ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဆရာမောင်ဝံသ မှ (သတင်းသည် ပြည်သူအတွက်)ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။
စာပေဟောပြောပွဲမှရရှိလာသောငွေအားလုံးကို ဒေါ်ခင်ကြည်ဖေါင်ဒေးရှင်း သို့ အကုန်လှူကြပါမည်။ဟု ဂျစ်တူး(မုံရွာ) ဘလော့ဂ်တွင် ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။လက်လွတ်မခံသင့်သော ဟောပြောပွဲကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း သတင်းပေး ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု Live ကြည့်ရန်... http://www.ustream.tv/channel/lotusfoundation2
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Thursday, August 02, 2012 |0 ခုလောက် ဝေဖန်ကြည့်ရအောင်
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Thursday, June 07, 2012 |1 ခုလောက် ဝေဖန်ကြည့်ရအောင်
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ တစ်သောင်းကျပ်တန်ငွေစက္ကူသစ် ကို ၂၀၁၂ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက်တွင် စတင်ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ညနေ (ဇွန်လ၇ရက်) ၆နာရီသတင်းတွင် တရားဝင်ကြေညာ လိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်သောင်းကျပ်တန်ငွေစက္ကူ နှင့်ပါတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားသည်မှာ ငွေစက္ကူမှာအရွယ်အစားအားဖြင့် ၁၅x၇ စင်တီမီတာရှိပြီး ပေါ်လွင်သောအရောင်မှာ အပြာရောင်ဖြစ်သည်။ ငွေစက္ကူ၏ မျက်နှာစာဘက် ထိပ်ပိုင်းတွင် "မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်" စာတမ်း ရိုက်နှိပ် ထားပြီး အလယ်ပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် မြေပုံ၊ ၎င်းကို ဝန်းရံထားသော သပြေခက် နှစ်ခက်၊ မျက်နှာချင်းဆိုင် တည်ရှိနေသည့် မြန်မာ့ အနုပညာ လက်ရာ မြောက် ဆင်ဖြူတော် နှစ်စီးနှင့် ထိပ်တွင် ကြာဖြူတစ်ပွင့် ရိုက်နှိပ် ထားပါသည်။ ငွေစက္ကူ တန်ဖိုးကို ဖော်ပြထားသည့် မြန်မာ စာတန်း "တစ်သောင်းကျပ်" ကိုလည်း ရိုက်နှိပ် ထားပါသည်။ လက်ယာ ဘက်ပိုင်းတွင် မြန်မာ့ အနုပညာ လက်ရာမြောက် ကနုတ်ပန်းခက် များကို ရိုက်နှိပ် ထားပါသည်။ ထောင့်သုံးထောင့် တွင် ငွေစက္ကူ တန်ဖိုးကို ဂဏန်း များဖြင့် ရိုက်နှိပ် ထားပါသည်။ ငွေစက္ကူ တန်ဖိုးကို မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ရိုက်နှိပ် ထားပါသည်။ လက်ဝဲဘက်ပိုင်းတွင် ကြာဖြူ ပွင့်ပုံ ရေစာ ပါရှိ ပါသည်။ ငွေစက္ကူတွင် လုံခြုံရေး ကြိုးတစ်ချောင်းကို ဒေါင်လိုက် ထည့်သွင်းထားသည်။ ကျောဘက်ထိပ်ပိုင်းတွင် "CENTRAL BANK OF MYANMAR" စာတန်းကို ရိုက်နှိပ်ထားပြီး ၎င်းစာတန်း၏ အောက်တွင် "TEN THOUSAND KYATS" ဟူသော စာတန်း ပါရှိပါသည်။ အလယ်ပိုင်းတွင် ရတနာပုံ မန္တလေး နန်းတော်၏ မြို့ရိုးနှင့် ကျုံးပုံ နှင့် ဘေးဘောင်များတွင် မြန်မာ့ အနုပညာ လက်ရာမြောက် ကနုတ် ပန်းခက်များကို ရိုက်နှိပ် ထားပါသည်။ထောင့် သုံးထောင့်တွင် ငွေစက္ကူ၏ တန်ဖိုးကို ဂဏန်းများဖြင့် ရိုက်နှိပ် ထားပါသည်။ ကိုးကား-ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
၀န်ဆောင်ခ(၈)သိန်းအပြင် ပိုမိုသွင်းရပါက တိုင်ကြားနိုင်
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Friday, March 16, 2012 |1 ခုလောက် ဝေဖန်ကြည့်ရအောင်
ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြမည့်သူများ ၀န်ဆောင်ခ(၈)သိန်းအပြင် အ ခြားစာရွက်စာတမ်းကြေးများ ပေးသွင်းရပါက တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုး ဦးစီးဌာနမှ သိရ သည်။ ယင်းကဲ့သို့ တိုင်ကြားရာတွင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာထံသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ (သို့မဟုတ်) ဖုန်းနှင့် ဆက်သွယ်၍ တိုင်ကြားနိုင်သည်။
“ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့ သူတွေက ၀န်ဆောင်ခ(၈) သိန်းအပြင် အခြားစာရွက်စာတမ်းကြေးတွေ ပိုမိုကောက်ခံရင် ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်စေ၊ မန်းနေးဂျင်းဒါရိုက်တာကိုဖြစ်စေ ဆက်သွယ် တိုင်ကြားနိုင်တယ်၊ သွားရောက်မယ့်လုပ်သားလောင်းတွေက အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီနဲ့ အလုပ်သ မား ကြားခံဝန်စာချုပ်ကို အသက်လိမ်ညာတာ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လိမ်ညာတာ၊ ကိုရီးယားမှာ တရားမ၀င်နေခဲ့ ဘူးတာ ဒါမှမဟုတ် ပြစ်မှုကျူးလွန်ဖူးတာစတဲ့ အချက်တစ်ခုခုကြောင့် စာချုပ်ညိစွန်းခဲ့ရင် တရားဥပဒေအရ အရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ၀န်ဆောင်ခ ပိုမိုကောက်ခံမှုအပေါ် တိုင်ကြားလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၆၆၇၇၅၄ သို့ဆက်သွယ် တိုင်ကြားနိုင် ကြောင်းသိရသည်။
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ. စာကြည့်တိုက်နံရံပေါ်မှ ဆုံးမစာ
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Sunday, February 19, 2012 |0 ခုလောက် ဝေဖန်ကြည့်ရအောင်
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ. စာကြည့်တိုက်နံရံပေါ်မှ အချက်၂၀ ဆုံးမစာကတော့… ၁) ဒီအချိန်မှာ အိပ်ငိုက်နေလျှင် မင်း အိပ်မက်မက်လိမ့်မည်။ ဒီအချိန်မှာ ကြိုးစားလျှင် မင်းအိပ်မက် အကောင်ထည်ဖော်နိုင်မည်။ ၂) ငါ လစ်လျှူခဲ့သောယနေ့သည် မနေ့က နောက်ရက်တွင် ပျက်စီးလိုသောသူ၏ဆုတောင်းခြင်းပင်။ ၃) အချိန်နှောင်းပြီဟု ထင်လိုက်သောအချိန်သည် အစောဆုံး အချိန်ပင်ဖြစ်သည်။ ၄) ယနေ့အလုပ်ကို နောက်နေ့အထိမဆွဲပါနှင့်။ ၅) စာကြိုးစားချိန် ပင်ပန်းတာဟာ တခဏပါ။ မကြိုးစားလိုက်ပါမှ တသက်တာပင်ပန်းမှာ။ ၆) သင်ယူတာဟာ အချိန်မရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိတာပါ။ ၇) စိတ်ချမ်းသာမှုဟာ အဆင့် သတ်မှတ်ထားတာ ရှိချင်မှရှိလိမ့်မည်။ အောင်မြင်မှုမှာတော့ရှိတယ်။ ၈) သင်ယူတာဟာ လူ့ဘ၀ရဲ.အားလုံးမဟုတ်ပါ။ လူ့ဘ၀ရဲ. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးကိုတောင်မှ မအောင်မြင်နိုင်ဘူး ဆိုရင် ဘာလုပ်နိုင်ဦးမှာလဲ။ ၉) မရှောင်ဖယ်နိုင်တဲ့ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုများကို ခံစားပါ။ ၁၀) သူများထက်ပိုစော၊ ပို ကြိုးစားနိုင်မှ အောင်မြင်မှုအရသာကို ခံစားရမှာ။ ၁၁) ဘယ်သူမှ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မအောင်မြင်နိုင်ဘူး၊ ဒါဟာ ကိုယ့်ရဲ. ပြည့်စုံသော ပင်ကိုယ်ထိန်းနိုင်စွမ်းအားနှင့် မလျှော့သော ဇွဲ လုံ့လတို့မှ ရရှိလာတာ။ ၁၂) အချိန်ဟာအမြဲတမ်းကုန်ဆုံးနေတယ်။ ၁၃) ဒီနေ့ယိုသောသားရည်သည်နောက်နေ့၏မျက်ရည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၁၄) ခွေးလိုသင် လူကြီးလူကောင်းလို ကစားပါ။ ၁၅) ဒီနေ့ မသွားလျှင် နောက်နေ့ပြေးရလိမ့်မည်။ ၁၆) အနာဂတ်ကို ရင်နှီးမြုပ်နံနေတဲ့သူဟာယခုလက်တွေ့ကိုသစ္စာရှိသူပါ။ ၁၇) ပညာရည်အဆင့်အတန်းဟာ ၀င်ငွေ အဆင့်အတန်း ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ ၁၈) တနေ့တာကုန်ဆုံးသွားလျှင် ပြန်မလာတော့ပါ။ ၁၉) အခုတောင်မှ သင်၏ပြိုင်ဖက်သည် စာရွက်ကို အဆက်မပျက်လှန်နေပြီ။ ၂၀) အကျပ်အတည်းအခက်အခဲမရှိလျှင် အကျိုးအမြတ်မရနိုင်ပါ။ှSorce: Facebook
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Sunday, February 12, 2012 |1 ခုလောက် ဝေဖန်ကြည့်ရအောင်
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Monday, February 06, 2012 |0 ခုလောက် ဝေဖန်ကြည့်ရအောင်